Ejipta : Nosamborin’ny tafika ary navotsotra avy eo i Wael Abbas · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2019 3:21 GMT
Anisan’ny fitantaranay momba an’i Ejipta ity lahatsoratra ity.
Notazonina teo amin’ny adiny iray teo androany ilay bilaogera Ejipsiana fanta-daza Wael Abbas izay nanampy tamin’ny fampahafantarana ireo fampijaliana sy ny herisetran’ireo mpitandro ny filaminana, izay nampitombo ny ahiahin’ireo mpisera Aterineto manerana izao tontolo izao. Anisan’ireo voatazona omaly ilay bilaogera Sandmonkey izay teny an-dalana hitondra fanampiana ara-pitsaboana ho any amin’ny kianja Tahrir.
Navoaka nanomboka tamin’izay i Wael Abbas, saingy sorena izy tamin’ny fanakanana azy ‘’isaky ny misy ny sakana’’, satria noahiahiana ho vahiny izy sy ny namany. Nampitombo ny adiny tamin’ireo mpanao gazety ny fitondrana Ejipsiana, niaraka tamin’ny famoretana nifantoka tamin’ireo mpikatroka politika sy ny fiarahamonim-pirenena omaly, ary ny mpanao gazety iraisam-pirenena ihany koa tetsy andaniny, ka namela ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nisy mpitarika, ary nanampim-bava ny mpanao gazety tetsy ankilany. Tahaka ny zava-nitranga teo aloha dia tsy nahomby ihany koa izany ary feno ny hafaliana androany raha nilahatra nandritra ny tontolo andro aza ireo olona an-tapitrisany mba hiantso ny fialan’i Moubarak.
Nanohy nampita mivantana ireo fihetsiketsehana tao amin’ny Bambuser i Wael Abbas, tahaka ireo mpikatroka maro hafa ao amin’ny Aterineto. Hita eto ireo lahatsariny.
Nandritra izany fotoana izany, nitohy hatrany ny fikarohana an’ilay mpiasan'ny Google Wael Ghonim , izay nanjavona hatramin’ny 25 Janoary (2011).
Nanome ny lisitr’ireo olona nosamborina hatramin’ny nanombohan’ny fihetsiketsehana tamin’ny 25 Janoary (2011) ny @ircpresident :